समाज रुपान्तरण र दिन दु:खी गरिबको लागि कृष्ण कंडेलको संघर्ष – Khabarhouse
समाज रुपान्तरण र दिन दु:खी गरिबको लागि कृष्ण कंडेलको संघर्ष
Khabar house | १ माघ २०७६, बुधबार १७:०१ | Comments
काठमाडौं। नेपाल एक भुपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । नेपाली समाजमा बिभिन्न जातजाती, ध’र्म, लिगं का मानिसको बसोबास छ । देशको मौलिकता, भेषभुसा, भाषा संस्कृतिलाई भुलेर बि’देशि संस्कारलाइ समाजमा भित्र्याउने प्रबितीले हाम्रो समाज पछि परेको छ । समाजमा धेरै किसीमका चुनौतिहरु आउने गरेका छन् । जहाँ राज्य पनि अहिले सम्म पनि पुग्न सकेको छैन जहाँ कृष्ण कंडेल पुग्नुभएको छ ।
दुरदराज बस्तीमा रहेका ति कलिला भाइ बहिनीले अँझैपनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाएका छैनन्, यस्ले गर्दा समाजमा रहेका जल्दाबल्दा युवा खाडि मुलुुकमा पलायन हुनुपरेको छ। सामाजमा रोग र भोकमारीले जरा मौलाउँदा पनि सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । नेपाल संघियता मा गइसकेपछि नेपाली लागरिकको ठुलो आसा र अपेक्षा थियो तर अहिले आएर त्यो सबै बालुवामा पानी खनायझैं भाको छ ।
यसप्रति सरकारको ध्यान जान जरुरि छ । समाजमा यसरी लागेको कालो पर्दालाई हटाउनका निमित्त बिश्वमा चर्चित कार्यक्रम एबिसी इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कंडेलले अतुलनिय भुमिका निभाउनु भएको छ । उज्यालो नेपाल समृद्धीका लागी साँकृतिक अभियानका साथ अघि बढेको लोकप्रिय कार्यक्रम एबिसी इन्द्रणीे पुराना सर्जकको सम्मान र नँया प्रतिभाको खोजिमा अघि बढेको छ ।
संस्कृती सभ्यताको जननी हो भन्ने मुल नाराको साथ अघि बढेको एबिसी इन्दे्रणीले पनि लोक सँस्कृतीको माध्यमबाट देशको संस्कृती र सभ्यतालाइ बचाइराखेको कुरा बिश्वभरी अवगत नै छ। प्रशिद्ध कार्यक्रम इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कंडेलले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ । बिगत दश बर्ष देखी सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यक्रको माध्यम बाट दुखि गरीब तथा रोगले पिल्सीएका जनताले साहारा पाउँदै आएका छन् ।
इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कंडेल दुरदराज बस्ती बस्तीमा लुकेर रहेका ति चपेटामा परेका आवाजलाई बुलन्ध पारेर न्याय दिने काम गर्नु भएको छ । समाजमा हुने संस्कार, संस्कृति बि’रोधि आवाको बि’रुद्धमा आवाज उठाउने त्यस्ता प्रकारका खरा’ख तत्वहरुलाई जरैबाट उन्मु’लन गर्नुमा उहाँको निकै ठुलो भुमिका भएको पाइन्छ । समाज रुपान्तरण भन्नाले समाजमा रहेका ख’राब तत्वहरुलाइ उन्मुलन गर्नु नै समाज रुपान्तरण हो । कृष्ण कंडेल कलाकार मात्र नभई समाजिक व्याक्तीत्व पनि हुनुहुन्छ । उहाँले नपालमा भैपरी आउने दैबिक प्रकोपमा परेका नागरिकको उद्धार गर्दै आउनु भएको छ ।
विपद्का बेला राजनीति भन्दा माथि उठेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
नेपाललाई बिश्वमाझ चिनाउँदै बलिउड अभिनेत्री परिणिती चोपडा !
कस्तो रहने छ आजको मौसम ? कता-कता कस्तो वर्षाको सम्भावना होला ?
उपल्लो मुस्ताङको सीमानाका कोरलामा पहिलो पटक पुग्यो बस